Dhaqdhaqaaq ciidan iyo dgaalo saaka ka jira duleedka magaalada Muqdisho
May 25, 2012 - Written by Afgooye:-Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan DFKM iyo kuwa AMISOM oo xoojin ah ay soo gaareen goordhow degaanka Carbiska oo maalmihii la soo dhaafay uu ka dhacayey dagaalo culus oo ay isku fara saareen ciidamo huwan ah oo ay hogaaminayaan ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM iyo ciidanka ururka Al-shabaab.
Goobjoogayaal ku sugan deegaan duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la arkeyy ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM iyo kuwa DFKM oo fariisamo ay ka samaysteen degaanka Carbiska ka wada dhaqdhaqaaq ciidan.
Sarkaal u hadlay goordhow ciidanka DFKM ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay hadda gaareen Ceelasha Biyaha, Calamada, Lafoole iyo degaano hor leh.
Ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM ayaa saaka bilaabay in ay baabuurta ay wataan ay soo maraan waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. dhinac kale waddada EX-Control Balcad ayaa waxaa kale oo ka jira dhaqdhaqaaq ciidan iyadoo laga cabsi qabo in uu ka qarxo dagaal u dhexeeya ciidanka AMISOM iyo kuwa ururka Al-shabaab